Pamutemo Russia ichave nyika yakaongororwa pane internet | Linux Vakapindwa muropa
Pakati pevhiki dzekupedzisira pakave nekutaura kwakawanda pamusoro pezviri kuitika muRussia maererano neinternet censorship.
Pakutanga mwedzi uno, tinodzidza kuti mutungamiri weRussia anoda yake internet uye mutemo unogadzira imwechete yepakati kubva uko Moscow yaigona kubata kuyerera kweruzivo kubva kune yayo cyberpace mutemo unoda kuti Russian Internet vanopa rubatsiro vimbise rusununguko rweRussia Internet nzvimbo (Runet), kuitira kuti ugone kudimbura nyika kubva kune imwe nyika.
Mazuva mashoma gare gare, takadzidzawo kuti, muRussia, zviuru zvevanhu zvakaratidzira zvichipesana nemutemo wekurambidzwa kweInternet, uyo unotarisira kubvisa nyika kubva kune dzimwe nyika.
Uyewo Izvo zvakakosha kuti urangarire zvakaitika svondo rapfuura nenhau dzekuti encrypted mail mupiki ProtonMail yakavharirwa muRussia.
Iko kunonzi chikonzero chaive icho sevhisi yakanga yatendera kupararira kwekutyisidzira kwebhombasekutyisidzirwa kwakawanda kusingazivikanwe kwebhomba kwakatumirwa neemail kumapurisa mukupera kwaNdira, zvichimanikidza zvikoro zvakawanda nezvivakwa zvehurumende kuti vabude.
1 Vladimir Putin akabvumidza iyo nyowani Internet yekudzivirira mutemo
1.1 Zvakanaka kana jeri
Vladimir Putin akabvumidza iyo nyowani Internet yekudzivirira mutemo
Uye zvinoita sekunge zvinhu zviri kuenda munzira imwechete kubvira Mutungamiri weRussia Vladimir Putin akasaina akateedzana mabhiri neMuvhuro inopokana iyo inoranga kushaya hanya kwehurumende uye nekuparadzira pamhepo kwemashoko enhema.
Russia haina kumbobvira yave nerusununguko uye hurumende yakagara ichishandisa nzira dzisiri dzechokwadi kumanikidza nhepfenyuro dzakazvimirira dzenyika. Asi nemutemo mutsva, hurumende yeRussia ikozvino ine zvinyowani maturusi ekugadzirisa kutaura pamhepo.
Kunyange zvakadaro maakaundi akagamuchirwa zvakaomarara nedzimba mbiri dzeparamende yeRussia, Izvo zvakakosha kuti uzive kuti vamwe vapamutemo vakavashoropodza nekuti ivo vanoona kuti izvi zvinotadzisa rusununguko rwekutaura.
Zvakanaka kana jeri
Naizvozvo, Nemitemo mitsva iyi, vanhu vanogona kutongerwa faindi nekuiswa mutirongo kana vakashambadzira zvinyorwa pamhepo zvinoratidza kushayikwa kwekuremekedzwa kwenzanga, Hurumende, zviratidzo zviri pamutemo zveRussian Federation, Bumbiro reRussian Federation nenhengo dzinoshandisa simba renyika.
Faini yekuparadzira nhau dzekunyepedzera inosvika pamamirioni 1,5 mamirioni kana angangoita madhora mazana maviri nemazana mapfumbamwe emhosva dzekudzokorora.
Nekutuka zviratidzo zvehurumende, zviremera kana Putin pachake anogona kurangwa nemutemo uye zvikwereti zvinogona kusvika mazana mazana matatu emaruble kana madhora zviuru mazana mana nemazana manomwe nemashanu mutirongo. Sezvazvakaita mune mimwe mitemo yeRussia, faindi dzinoverengerwa pahwaro hwekuti mutadzi mugari, mutariri kana munhu ari pamutemo.
Aya matanho akakonzera kusagadzikana uye vatapi venhau vanodarika zana, pamwe neveruzhinji, kusanganisira murwiri wekodzero dzevanhu Zoya Svetova uye munyori akakurumbira Lyudmila Ulitskaya, uyo akasaina chikumbiro chakapesana nemutemo, icho chavanorondedzera sekurambidza chaiko.
Asi, chokwadi, Kremlin haigovane iyi pfungwa zvachose.
Uyezve, kuburikidza nemutauriri wayo Dmitry Peskov, iyo Kremlin inodaro Maitiro akatenderwa nemutemo mutsva akaomeserwa zvakanyanya munyika dzinoverengeka pasi rese, kusanganisira Europe, uye hazvifanirwe kushamisika kuti Russia inoonekwa ichiita zvakafanana.
Mumakore ekupedzisira e5, hurumende yeRussia zvishoma nezvishoma yakasimbisa kutonga kwayo paInternet, semuenzaniso, zvinoda injini dzekutsvaga kuti dzibvise zvimwe zvekutsvaga kana kuisa pamasocial network kuchengetedza dhata remunhu wega revashandisi veSeva munyika.
Sezvo matanho aya anga asati akosheswa, bhiri rakasainwa Muvhuro wadarika harina kuuya kuzogadzirisa zvinhu.
Zvinhu zvevanhu veRussia zvinoita sezvisina kunge zvakanaka nekuti isu tinofanirwa zvakare kuyeuka kuti yakakurumbira meseji yekutumira mameseji Teregiramu yakavharwawo muRussia.
Uye ndezvekuti izvi zvave kuitika zvishoma nezvishoma, zvinoita senge zvishoma nezvishoma kuzviparadzanisa uko hurumende yeRussia inoda kutonga kwekuparadzirwa kweruzivo nezvenharaunda yaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Pamutemo Russia ichave nyika yakaongororwa pane internet
Uye chii chavanodaidza kuti Russia, gag mutemo?
Pindura kune Mumwezve
Fernando Arancibia nzvimbo yekuchengetedza mufananidzo akadaro
Izvi zvehurumende yeRussia kubvisa Russia kubva paInternet semuyedzo, chikamu chekuwedzera kuri kuwedzera kwekurwiswa kwemauto nemasangano akazvimirira. Ivo vari kufunga kuti chero nguva iyo US inogona kudimbura Russia kuti iripe zvirango zvakanyanya, nekuda kweichi chikonzero ndechekuti kubviswa kwekubvisa kuchaitwa uye kuti yeRussia Internet inoramba ichishanda.
Pindura Fernando Arancibia
Yakasarudzika uye isina kukwana anti-Russian nhau. Kushaikwa kwekuremekedza muverengi uyo asingade kuona zvematongerwo enyika kune rwiyo rwaTrump.
Fernando anopa mamiriro enhau.
Firefox 66 ikozvino yawanikwa, yakaipa kumakomputa akajeka ane marongero ekutanga